अन्ततः ठेगान लागे ओली, एमाले अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल ! - Rising Dainik
June 17, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on अन्ततः ठेगान लागे ओली, एमाले अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल !
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता र नेता माधव कुमार नेपालका लागि अध्यक्ष पद छोड्ने भएका छन् । यसका लागि माधव नेपाललाई एकल अध्यक्ष बनाउन ओली राजी भएका छन् ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मु’द्धासहित माधव नेपाल समूहको हस्ताक्षर पनि लिएर अदालत गएको विपक्षी गठबन्धनमा तरंग उत्पन्न भएको छ । ओलीले प्र’हार गरेको अस्त्रबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने कुरामा विपक्षी गठबन्धन ढुक्क प्राय छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको रिट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
१४६ जना सांसदहरुले सर्वोच्चमा दायर रिटलाई लिएर ओली चिन्तित रहेको उनका निकटतमहरुले बताउने गरेका छन्। ओली जसरी हुन्छ माधव पक्षीय सांसदलाई रिट फिर्ता गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाको २६७ सांसदको बहुमत नपुग्ने स्थिति बनाएर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्।
यसअघि आफूमाथि जताततै घेराबन्दी भएपछि तोड्नका लागि ओलीले नेकपा एमाले एकताका लागि जेठ २ अगावै फर्किन तयार रहेको प्रस्ताव गरेका थिए। फेरी पनि विपक्षीको व्यूह तोड्नको लागि त्यो प्रस्तावबाट अझ अघि बढेर असन्तुष्ट नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको एकल अध्यक्षको लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
ओलीले बारम्बार दूत पठाएर नेता नेपाललाई फकाउन थालेपछि देउवा(प्रचण्ड झस्किएका छन्। एकल अध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थाहा पाए पछि हत्तपत्त अरु नेताको निवासमा नपुग्ने देउवा पनि कोटेश्वर स्थित नेपाल निवासमा पुगेका थिए। त्यहिँ दिन प्रचण्ड पनि नेपाल निवास पुगे।
उक्त बैठकमा गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो। बाहिर जे भनिए पनि उक्त भेटघाटमा प्रचण्ड र देउवालाई नेता नेपालले ओलीको प्रस्तावबारे सुनाएका थिए।
प्रचण्ड-देउवाले ओली प्रतिगमनको बाटो हिँडेकाले उनलाई सत्ता च्यूत गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। अदालतले संसद विघटनबारे फैसला नदिने बेलासम्म ओलीसँग कुनै सम्झौता नगर्न आग्रह नेता नेपाललाई गरेका थिए।
प्रचण्ड देउवाले माधव नेपाललाई सरकारमा उच्च स्थान दिने र सक्दो सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन् भने नेता नेपालले पनि आफू कुनै पनि हालतमा ओलीसँग नमिल्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन माग
नेकपा एमालेका नेता रामप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
ओली पक्षले नेपाल लगाएत उनको पक्षलाई गरेको का’रवाही विना शर्त फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । नेता रिजालले माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गर्ने यसो गर्दा एमाले पनि एकीकृत हुने र जनमतको पनि कदर हुने उनको भनाई छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप एमाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरु व्युझाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । नेता रिजालले फागुन २८ को ओलीको गुट भेलाले गरेको निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने बताए । यो नै एमाले जुटाउने सुत्र भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कांग्रेस र जसपालाई सरकार बनाउने चाबी नसुम्पियौं एमालेकै नेतृत्वमा बाम सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । पार्टी कमिटी लाई विधिः पद्धतिमा चलाऔं जनताले वाम गठवन्धनलाई जनमत दिएकोले यही गठबंधनको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ त्यसको लागि एमाले पार्टीको पदाधिकारी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर आवाश्यक निर्णय गरेर जानुपर्नेमा नेता रिजालको जोड छ ।
महेन्द्र राजाको बाटोमा ओली, पञ्चायती निर्दलीयता व्यवस्था ब्यूँत्याउने ओलीको घोषणा !
म्याद गुज्रेका चार करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री ब’रामद
यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला हुन्छन् धनकी देवी लक्ष्मीका प्रिय
March 20, 2021 Ramash Kunwar